सुन लगाउदा भा”इरस सर्छ, बिर्तामोड मेयर =सिवाकोटी – Purba Aawaj
सुन लगाउदा भा”इरस सर्छ, बिर्तामोड मेयर =सिवाकोटी
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७८ समय: १७:१२:५७
झापाको विर्तामोड नगरपालिकाका मेयर धुब कुमार सिवाकोटीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘सुनले भा’इ’रस तान्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा भा’इरल भएको छ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मेयर सिवाकोटीले भनेका छन्, ‘सबै आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदिबहिनीले सुनका औंठीहरू, चेनहरू लगाउनुभएको छ भने भरे नै खोल्दिनुस्। किनभने यसले भा’इ’रसलाई छिटो लिने गर्छ। मेरो पनि औं’ठी’हरू, चेनहरू सबै मैले राखेको छु।’
यसबारे बुझ्न मेयर सिवाकोटीलाई फोन गर्दा उनले धातुले भा’इर’सलाई तान्ने भन्दै उही अभिव्यक्ति दिए। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘धातुले स्वाभाविक रूपमै भा’इ’र’सलाई तान्छ। सुनको औंठीहरूमा बाहिर स्यानिटाइजर लगाउँछौं तर भित्रपट्टी त लाग्दैन नि।
अघिल्लो को’रो’ना लहरमा आफूले औंठी लगाएकै कारण सं’क्र’मण भएको सुनाउँदै मेयर सिवाकोटीले भने, ‘पहिलो को’भि’ड’को बेला एकदम सु’रक्षित भएर बसेको थिएँ। तर चार वटा औंठी लगाएको थिएँ। त्यसैले त्यो बेला को’भि’ड लाग्यो।’
औंठी लगाएकै कारण को’रो’ना लागेको अनुमान भएपछि मेयर सिवाकोटीले अहिले औंलामा लगाएको सबै औंठीहरू फुकालेर राखेका छन्। चेन, घडी केही पनि लगाएका छैनन्। यति मात्र हैन उनले आफ्ना नगरवासीलाई समेत औंठी, चेन, घडी केही पनि नलगाउन आग्रह गरेका छन्।
तर विज्ञहरू भने भा’इ’रस र धातुबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँछन्। भाइरोलोजिष्ट डा. लुना भट्ट भन्छिन्, ‘भा’इ’रस र धातुको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। भा’इ’रसलाई कसैले तान्दैन। तान्यो भने नाकले तान्ने हो। किनभने नाकको कोषहरूमा भा’इ’रसलाई तान्ने ‘रिसेप्टर’ धेरै हुन्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग गर्ने भनिएको हो।’
मेयर सिवाकोटीले दिएको अभिव्यक्तिमा कुनै तथ्य नरहेको भन्दै त्यस्तो कुरामा विश्वास नगर्न डा. भट्टको आग्रह छ। ‘उहाँले भन्नुभएको कुरा अफवाह मात्र हो। जनप्रतिनिधिले टिभीमा गएर हाकाहाकी त्यसरी हावा गफ दिनु भनेको वेसारको गफभन्दा पनि डरलाग्दो भयो,’ उनले भनिन्।
यस्तो सं’वे’द’नशील घडीमा बिना तथ्य जथाभावी बोल्नेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने डा. भट्टको भनाइ छ। सरकारले अ’फ’वाह फै’ला’उनेलाई मतलब नगर्ने तर तथ्यसहित बोल्ने विज्ञलाई भने बोल्नबाट सधै कस्न खोजेको उनी बताउँछिन्।
यहाँ विषय विशेषज्ञको मुख थुन्न खोजिन्छ तर नेता, जनप्रतिनिधिहरूले चाहि बेसार, गुर्जो, अम्बाको पात खानू भनेर बोल्दा पनि हुने र सुन नलगाउनुस् भन्न पनि हुने,’ उनले भनिन्, ‘हामीले बोल्यो भने तिमीहरू धेरै धेरै नबोल है’ भन्ने।
Last Updated on: June 3rd, 2021 at 5:12 pm